८ लाख राजश्व तिर्न नसक्दा बुद्ध लामाले नेपाल आइडलमा जितेको कार चढ्न पाएनन् – Peacepokhara.com
८ लाख राजश्व तिर्न नसक्दा बुद्ध लामाले नेपाल आइडलमा जितेको कार चढ्न पाएनन्
काठमाडौं २४ फागुन । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रशारित नेपाल आइडलको पहिलो संस्करणका विजेता बुद्ध लामाले पुरस्कार बापत जितेको कार चढ्न अझै पाएका छैनन् । पुरस्कार स्वरुप जितेको कारको चाबी हस्तान्तरण गरिएपनि सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लूबुक ) अझै उनको हात परेको छैन ।
कारको ब्लूबुक प्राप्त गर्न ८ लाख रुपैया राजश्व तिर्नुपर्ने भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडियो समेत सार्वजनिक गरेका छन् । अडियोमा उनले नेपाल आइडल भएवापत पुरस्कारमा जितेको कार अहिलेसम्म चलाउन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
‘मैले पुस्कारमा जितेको कार पाएँ, तर ब्लुबुक पाएको छैन । ब्लुबुक नपाएपछि गाडी कसरी चलाउने ? ’ उनले भनेका छन् । कार प्राप्त गर्न तोकिएको ८ लाख रुपैया राजश्व तिर्न सक्ने अबस्थामा आफु नरहेको समेत उनले बताए ।
‘म कति धाउनु ? कति धाउनु ? आठ महिनादेखि धाउँदैछु हेर्नुस । यो त मेरो खास कामै होइन नी । चेक दियो घरमा पैसा छैन । कताबाट ल्याउने ? आठ लाख माग्छ मैले कहाँबाट ल्याउने ? तिनीहरुले तिरेर ल्याउनुपर्ने होइन र यो त ? ’ अडियोमा उनले भनेका छन् । आफुलाई निकै अप्ठेरो लागिरहेको भन्दै उनले यो सन्देश भाइरल बनाइदिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
चौथो संस्करणको नदिपुर कप असोजको तेश्रो साता देखि
peacepokhara 15 Aug 2016
अपडेट : बिहारमा मोदीको हार , नीतिश-लालु गठवन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत
peacepokhara 08 Nov 2015
राष्ट्रियसभा निर्वाचन: २४ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित